Vatsoropodzi vanoda mwaka wechipiri waDickison uye Wevanhu Vose | Ndinobva mac
Kubva kutanga kwegore, Apple yanga ichitambira kusarudzwa kwemamwe akateedzana anowanikwa paApple TV +, Ted Lasso ari iwo akateedzana ayo akabudirira kwazvo mumakwikwi aya. Nekudaro, havazi vese vanovimba nemubairo uyo akateedzana kana mabhaisikopo kuti awane zvishoma zvawo.
Vamwe vashandisi vanoisa zvinokurudzira zvavo zvekutarisa zvinyorwa zvitsva pane iyo vatsoropodzi maonero. Mupfungwa iyi, tinogona kuona kuti Apple yaita chaizvo mushe yechipiri mwaka we Kune vanhu vese sezvazvakaita Dickisonsezvo ivo vaviri vane 100% yakakosha mamaki.
Kana iwe uchida mafirimu uye terevhizheni akateedzana, iwe ungangove unoziva Madomasi akaora, chimwe chezvinyorwa zvinoshandiswa zvakanyanya pasi rese nemamirioni evashandisi kuyera zvemukati uye kutsvaga mazita matsva.
1 Kune vanhu vese
3 Iyo Snoopy Show
Kune vanhu vese
Iwo zvibodzwa zvawakagashira Zvevanhu Vese mu Tomatometer yemwaka wayo wechipiri inomira pa100% mushure mekugamuchira zvibodzwa zve 18 vatsoropodzi vehunyanzvi.
Mwaka wekutanga wenyaya dzino dzakatambira mamakisi makumi manomwe nematatu muzana pawebhusaiti imwechete iyi, inomiririra a kuwedzera kukuru tichienzanisa mwaka uno mutsva.
La ruzhinji maonero kwemwaka wechipiri uyu i74% ukuwo mwaka wekutanga wakawana 86%.
Dickinson ndeimwe yeakateedzana ayo ave zvakare 100% yakayerwa nevashoropodzi makumi maviri nevatatu. Kana isu tikataura nezve chikamu chakapihwa neruzhinji, izvi zvakasvika 82%.
Mwaka wekutanga wenyaya dzino wakatambira 75% papuratifomu imwechete nevatsoropodzi uye 90% nevashandisi.
Iyo Snoopy Show
Dzimwe nhepfenyuro idzo yawanawo el 100% pane iyo Tomatometer Ino inguva yekutanga yeiyo Snoopy Show nevatsoropodzi uye 86% nevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Vatsoropodzi vanoda mwaka wechipiri waDickison uye Kune Vese Vanhu
Radar muApple Mepu inosvika kune dzimwe nyika